Top 5 serum chống lão hóa tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 serum chống lão hóa tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 serum chống lão hóa tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Eminyakeni engu-30, isikhumba sabesifazane sizoqala ukubonisa izimpawu zokuguga ngezinyawo zegwababa, imibimbi noma isikhumba esincane esinwebekayo. Ngakho-ke, uma unganakekelwa ngokucophelela, le nqubo yokuguga kwesikhumba izokwenzeka ngokushesha.
Ngakho manje imikhiqizo i-anti-aging serum Zithandwa kakhulu ngamantombazane anemiphumela ephumelela kakhulu yokubuyisela. Ake sifunde isihloko esingezansi ukuze sifunde okwengeziwe ngalo mkhiqizo!
1 Izisekelo zemikhiqizo ye-serum elwa nokuguga
2 Izithako ze-serum ezilwa nokuguga kanye nokusetshenziswa
2.1 Izinzuzo zama-serum zamanje zokulwa nokuguga
2.1.1 Ithambisa futhi yondle isikhumba ukuze sihlale sithambile futhi sibushelelezi
2.1.2 Isula futhi iqede izimpawu zokuguga
2.2 Izithako ze-serum ezilwa nokuguga
3 Imikhiqizo edumile yama-serum anti-aging
3.1 I-Sakura Anti-Aging Serum
3.2 I-Shiseido Anti-Aging Serum
3.3 I-Laneige Anti-Aging Serum
3.4 I-Loreal Anti-Aging Serum
4 Indlela yokukhetha i-serum engcono kakhulu yokulwa nokuguga namuhla
4.1 Khetha i-serum ngokohlobo ngalunye lwesikhumba
4.2 Khetha izithako zokulwa nokuguga
4.3 Beka kuqala imikhiqizo ye-serum evela emvelweni
5 Ama-serum angu-5 angcono kakhulu okulwa nokuguga okufanele ukwazi
5.1 Ukwelashwa Kwe-Dew & Dew Vitamin C Serum Anti-Aging Serum 50ml
5.2 I-Dew & Dew Anti-Aging Serum 24k Gold Collagen Anti Wrinkle 50ml
5.3 I-Palmer’s PA4538 Anti-Aging Serum 30ml
5.4 I-Botani Olive Skin Serum Anti-Aging Serum BPSO003 15ml
5.5 I-Jeju Innisfree Anti-Aging Serum The Green Tea Seed Serum 80ml
Izisekelo zemikhiqizo ye-serum elwa nokuguga
I-Serum yaziwa njengenye yemikhiqizo yokusiza ukusekela izimo zesikhumba esomile, isikhumba esibi, isikhumba sezinduna kanye nezimo zesikhumba zokuguga. Le mikhiqizo inoketshezi ekuthunjweni, ayisindi futhi imunca kalula. I-serum yomkhiqizo yaziwa nangokuthi i-serum, lena ingqikithi yokunakekelwa kwesikhumba engcono kakhulu namuhla.
Izithako ze-serum ezilwa nokuguga kanye nokusetshenziswa
Imikhiqizo ye-serum yaziswa kakhulu futhi ithandwa abasebenzisi abaningi uma inokuningi okusebenzisekayo okuwusizo kanye nezithako zemvelo, ngakho-ke iphephe kakhulu. Ngokulandelayo:
Izinzuzo zama-serum zamanje zokulwa nokuguga
Amaserum aziwa njengesinyathelo esibalulekile ezinyathelweni zokunakekelwa kwesikhumba. Ngokulandelayo:
Ithambisa futhi yondle isikhumba ukuze sihlale sithambile futhi sibushelelezi
I-Serum isiza ukugcwalisa imisoco ebalulekile ukondla isikhumba esithambile nesibushelelezi kusuka ekujuleni. Ikakhulukazi kusukela eminyakeni engu-25, isikhumba siqala ukwehlisa i-collagen, ngakho-ke kuzokwenza isikhumba singabi namandla futhi siqine. Ngakho-ke, i-serum isiza ukugcwalisa nokukhuthaza ukukhiqizwa kwe-collagen ngempumelelo kakhulu.
Isula futhi iqede izimpawu zokuguga
Imibimbi noma izinyawo zegwababa zenza abesifazane abaningi bakhathale, bangazethembi futhi bafuna i-serum ezosiza ukubuyisela kanye nokudala ukuphumelela kwesikhumba. I-Serum isiza ekususeni izimpawu zokuguga, inciphise amabala amnyama, i-melasma noma ama-freckles ukuze ikhanye, ngisho nebala lesikhumba futhi idale ukunwebeka kwemvelo okwengeziwe.
Xem Thêm Ví VNPAY là gì? Chương trình khuyến mãi ví VNPAY mới nhất 2022 | Muasalebang
Izithako ze-serum ezilwa nokuguga
Izithako ezivamile kumkhiqizo ngamunye we-serum zihlanganisa amavithamini E, C, retinol, B3 nama-peptides. Ngaphezu kwalokho, i-serum ibuye ibe nenani lezinye izithako ezinemiphumela emibili ehlukene njengokwelapha izinduna, ukwenza mhlophe nokukhanyisa isikhumba.
Imikhiqizo edumile yama-serum anti-aging
Njengamanje, kunezinhlobo eziningi ze-serum brand ezidumile zokuthi abesifazane bathembele futhi babeke phambili ukuzisebenzisa. Ngokulandelayo:
I-Sakura Anti-Aging Serum
I-serum ye-Sakura yaziwa ngokukhiqizwa kwayo ngezinqubo zobuchwepheshe zaseJapane eziqine kakhulu ngekhwalithi yokunakekelwa kwesikhumba enhle kakhulu. Imikhiqizo yalo mkhiqizo ikhishwa ngo-100% emvelweni ukuze ingeze amavithamini A, C no-E ngezithako ezisebenzayo zokulwa nokuguga, ukubuyisela ukubukeka kobusha bemvelo.
I-Shiseido Anti-Aging Serum
Lolu hlobo lwezimonyo lwe-Shiseido ludabuka e-Japan, enedumela elihle emakethe futhi eligqamayo ngenqubo yokukhiqiza ehlolwe ngokuqinile kusukela ekuqaleni ukuze kuqinisekiswe ukuthi kuphephe kakhulu kubasebenzisi. Imikhiqizo lapha yonke inezithako zemvelo kanye nezikhishwe zemvelo ezizuzisayo, ngakho zisiza ukubuyisela emuva izimpawu zokuguga ngempumelelo. Imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba eqinile, iphephile futhi ayinabo ubuthi. Kodwa intengo yomkhiqizo emakethe iphezulu kakhulu.
I-Laneige Anti-Aging Serum
I-Laneige yaziwa njengomkhiqizo wezimonyo wezinga eliphezulu osuka e-Korea. Lesi sithako se-serum ye-laneige sinomthelela omangalisayo wokufiphalisa imigqa emihle, imibimbi kanye nesikhumba esomile esimanzisa. Umkhiqizo usiza futhi ukubuyisela ukwakheka kwesikhumba, ukwandise ukunwebeka kwemvelo futhi usize ukuvuselela isikhumba ngemuva kwesikhashana nje ngesakhiwo se-micro-particle.
I-Loreal Anti-Aging Serum
Le serum ye-Loreal isuka eJalimane futhi ikhiqizwa emigqeni yesimanje kakhulu yezobuchwepheshe. Izithako zemikhiqizo ye-serum zisiza ukuthuthukisa umsebenzi oqinile we-antioxidant, imibimbi efiphalayo, i-pigmentation noma ama-freckles ngokushesha futhi ngokuphelele ukunakekela isikhumba kanye nokubuyisela ukwakheka kwesikhumba. Umkhiqizo ngamunye uhlolelwa ukuphepha futhi awunawo amakhemikhali ayingozi.
Indlela yokukhetha i-serum engcono kakhulu yokulwa nokuguga namuhla
Ukukhethwa kwemikhiqizo ye-serum nakho kunendima ebaluleke kakhulu futhi ikakhulukazi lapho ukhetha imikhiqizo yezimonyo ukugwema izimo ezicasulayo ezithinta isikhumba. Ngokulandelayo:
Khetha i-serum ngokohlobo ngalunye lwesikhumba
Ama-Serums anomphumela ojulile ngezithako ezigxiliwe, ngakho-ke azoba nomphumela osheshayo esikhumbeni. Ukuze ukwazi ukusebenzisa lo mkhiqizo ngemiphumela ephezulu, abasebenzisi kudingeka bahlole isimo sesikhumba abasitholayo ukuze bakhethe umugqa womkhiqizo ofaneleka kakhulu nophephe kakhulu futhi bagweme ukucasuka okungadingekile.
Khetha izithako zokulwa nokuguga
Izithako ze-serum zizogxila futhi zihlukaniswe zibe ama-molecule amancane angakwazi ukungena ekujuleni kwesakhiwo sesikhumba. Ngakho-ke, lapho ukhetha ukuthenga, abasebenzisi kufanele banake ukuhlola imikhiqizo eqediwe ye-serum kanye nezithako ezidingekayo ezisebenzayo ukuze bakwazi ukuletha ukusebenza kahle okuphezulu.
Xem Thêm Lên men là gì? Nguồn gốc và các phương pháp lên men phổ biến | Muasalebang
Beka kuqala imikhiqizo ye-serum evela emvelweni
Uma ukhetha ukuthenga i-serum ezosetshenziswa esikhumbeni, abasebenzisi badinga ukubeka phambili izithako zemvelo noma okukhishwe kwemvelo okungu-100%. Ngoba lezi zitshalo zizosiza ukondla nokunakekela isikhumba ngokuphepha, ikakhulukazi esikhumbeni esibucayi. Lawa ma-serum azosebenza kancane kodwa aphephe kakhulu futhi awacasuli isikhumba. Ngaphezu kwakhe, abasebenzisi kufanele futhi bagweme ukusebenzisa izithako zamakhemikhali zokwenziwa, izilondolozi noma amakha okwenziwa nama-parabens.
Ama-serum angu-5 angcono kakhulu okulwa nokuguga okufanele ukwazi
Njengamanje emakethe kunemikhiqizo eminingi ye-serum elwa nokuguga esebenzayo futhi ephephile kakhulu. Nansi imikhiqizo engu-5 ehamba phambili yokulwa nokuguga okufanele uyazi ngale ndlela elandelayo:
Ukwelashwa Kwe-Dew & Dew Vitamin C Serum Anti-Aging Serum 50ml
I-Dew&Dew Vitamin C Treatment Serum 50ml akuwona kuphela umkhiqizo odume kakhulu namuhla, kodwa futhi inezinzuzo eziningi ezivelele ngale ndlela elandelayo:
I-Dew & Dew Vitamin C Treatment Serum 50ml ithuthukisa ukukhiqizwa kwe-collagen ukusiza ukunwebeka kwesikhumba futhi iqinise izimbotshana zesikhumba esibushelelezi, yenza mhlophe noma ibuyisele isikhumba esonakele ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, igqamile ngesithako sayo se-vitamin C, ngakho-ke inomphumela osebenzayo wokulwa namagciwane, induna kanye ne-alkaline enamafutha. Izithako zale serum zonke zingokwemvelo futhi ziphephe kakhulu kuzo zonke izinhlobo zesikhumba kunoma iyiphi iminyaka kusukela ku-22 kuya phezulu.
I-Dew & Dew Vitamin C Treatment Serum 50ml okwamanje isakalwa njengomkhiqizo omuhle kakhulu futhi ayikatholi mpendulo engemihle ngomkhiqizo futhi ayibanga nezimo zesikhumba kubantu besifazane.
I-Dew & Dew Anti-Aging Serum 24k Gold Collagen Anti Wrinkle 50ml
I-anti-aging serum – Dew&dew 24k gold yaziwa njengomugqa wezimonyo zokunakekela isikhumba ezinemiphumela esheshayo ethandwa ngabesifazane abaningi. Ngokuqondile:
I-Dew&Dew 24k Gold Collagen Anti Wrinkle 50ml ikhishwa i-100% emvelweni ngezithako zegolide ezingama-24K ezihlanganiswe ne-Collagen ukusiza ukuqinisa ukwakheka kwesikhumba kanye nokuxhumana kwamaseli okusebenzayo. Ngaphezu kwalokho, le serum iphinde ikhishwe emafutheni e-rosehip ukuze ibe imibimbi ebushelelezi.
Product Dew & Dew 24k Gold Collagen Anti Wrinkle 50ml isiza ukwenza isikhumba sibe mhlophe, sifiphale amabala amnyama namabala ngenxa yezithako ezisebenzayo ze-antioxidant ezisiza ukuxosha ama-melanin radicals abangela isikhumba sibe mnyama. Ngaphezu kwalokho, i-serm isiza futhi ekwandiseni umswakama, isikhumba semvelo simhlophe ngamaseli amasha avuselelwa ngokuqhubekayo kanye nekhono lokungena ngokujulile, ngakho-ke kuyoba nemiphumela ebonakalayo ngemva kwamasonto amathathu kuphela okusetshenziswa.
Xem Thêm Top 4 dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí tốt nhất | Muasalebang
I-Dew&Dew 24k Gold Collagen Anti Wrinkle 50ml ingumkhiqizo wamanje ongakaze uthole ukubuyekezwa okubi okuvela kumakhasimende.
I-Palmer’s PA4538 Anti-Aging Serum 30ml
I-PA4538 30ml ye-Serum Palmer yaziwa njengomkhiqizo osebenza kahle kakhulu wokubuyisela isikhumba kanye nowokuguga. Ngokulandelayo:
I-PA4538 30ml kaPalmer igqama kakhulu ngezinzuzo ezithile ngokulandelayo:
Ukwakhiwa kwe-PA4538 30ml ye-Palmer kuhlanganisa izinhlanganisela eziyisi-9 zokulwa nokuguga ezisiza ukuxosha ama-radicals mahhala kanye nokuqukethwe kwe-vitamin E okuzosebenza ukwandisa ukukhiqizwa kwe-collagen ukuze ikwazi ukuhlela kabusha isikhumba esincane, esinempilo, esinwebekayo nesisha.izingane zemvelo.
I-PA4538 30ml ka-Palmer ikhishwa ikakhulukazi kubhontshisi kakhokho, imbewu ye-sesame yasentwasahlobo kanye nezinqulu ze-rose zemvelo. Lo mkhiqizo onokwakheka kwezinhlayiyana ezincane, ungena kalula ujule, ngakho ungengeza izakhi ezilwa nokuguga, uqinise isikhumba futhi uqinise izimbotshana ukuze wenze isikhumba sibe bushelelezi futhi sibe ngokwemvelo.
Izithako ku-serum aziqukethe izinto zokulondolozwa futhi ziphephe kakhulu kuzo zonke izinhlobo zesikhumba.
Umkhiqizo we-serum we-Palmer’s PA4538 30ml ulinganiselwa ukuthi ubiza kancane cishe ngezinkulungwane ezingama-430 / 30ml.
I-Botani Olive Skin Serum Anti-Aging Serum BPSO003 15ml
I-Botani Olive Skin Serum BPSO003 15ml ithandwa abesifazane abaningi uma isetshenziswa ngezinzuzo ezimbalwa kanye nokubi ngendlela elandelayo:
I-Botani Olive Skin Serum BPSO003 15ml inezinzuzo eziningi ezivelele, okwenza kube yinto ebaluleke kakhulu ukuthi abantu besifazane bayisebenzise. Ngokulandelayo:
I-Botani Olive Serum iqukethe cishe u-99.7% we-Olive squalene, ngakho inamandla okuthuthukisa ukukhiqizwa kwe-Collagen ne-Elastin ukusiza ukwakheka kwesikhumba kuqine, kuphelele futhi kwandise nokunwebeka kwemvelo kobusha.
Izithako zale serum uvithamini C 0.3% kanye novithamini E ukusiza ukukhuthaza isikhumba esibushelelezi esimhlophe kanye nokukhiqizwa kwamangqamuzana esikhumba amancane kanye nokubuyisela ubusha besikhumba.
Lo mkhiqizo we-serum unamandla okwandisa isici sokuvikela ilanga se-SPF15 ngomphumela wokuvikela isikhumba emathonyeni emvelo.
Izithako zemvelo ziphephile, azinawo amakhemikhali futhi zingasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zesikhumba.
Umkhiqizo we-Botani Olive Skin Serum BPSO003 15ml uthathwa njengobiza kakhulu cishe nge-870,000 VND ene-15ml kuphela.
I-Jeju Innisfree Anti-Aging Serum The Green Tea Seed Serum 80ml
I-Jeju Innisfree ISerum Yembewu Yetiye Elihlaza engu-80ml yaziwa njengomkhiqizo wemvelo ongu-100% futhi ihlanganisa izithako ezigxilile ezivela emaqabunga noma itiye elihlaza elivunwe e-Jeju Island of Korea.
Lo mkhiqizo we-serum uthandwa ngabesifazane abaningi ukuba bawusebenzise ngezinzuzo ezilandelayo:
I-Jeju Innisfree ISerum Yembewu Yetiye Elihlaza engu-80ml enefomula yezinhlayiya zamangqamuzana amancane, ingangena kalula ekujuleni kwesakhiwo sesikhumba.
Kufakwe izithako zetiye eliluhlaza kanye nezithako ezisebenzayo ngokumelene nama-radicals mahhala nama-antioxidants emvelo anenzuzo emzimbeni, ikakhulukazi esikhumbeni.
I-Serum inomphumela wokuthuthukisa umswakama esikhumbeni esomile futhi isiza isikhumba ukuba sinwebeka futhi sibe busha ngendlela yemvelo.
Inamandla avelele okuthambisa futhi iqinisa ukwakheka kwesikhumba ngezinhlobo eziyi-16 zama-Amino Acids.
Intengo yomkhiqizo i-Jeju Innisfree I-Green Tea Seed Serum 80ml icishe ibe yizinkulungwane ezingama-600 / ibhokisi lika-80ml.
Lo mkhiqizo i-Jeju Innisfree I-Green Tea Seed Serum 80ml okwamanje ayinazo izibuyekezo ezimbi, ngakho-ke azikho ezinye ezimbi okwamanje.
Umkhiqizo ngamunye i-anti-aging serum Bonke banezithako eziningi ezinomsoco ezivela emvelweni, ngakho-ke ziphephe kakhulu futhi zisebenza kahle kakhulu kwabesifazane. Lo mkhiqizo uqinisekisa ukuguga, ufiphalisa izinyawo zegwababa noma imibimbi futhi uletha nobuhle obuqinisekayo, obukhangayo njengowesifazane osemusha.
Uma usazibuza ukuthi yimuphi umkhiqizo ongawukhetha, ungabheka omunye wemikhiqizo emi-5 okukhulunywe ngayo esihlokweni noma ukhethe i-serum. I-Jeju Innisfree Imbewu Yetiye Elihlaza Serum 80ml qiniseka ukunikeza umphumela oyifunayo.
(Kuvakashelwe izikhathi ezingu-4,579, ukuvakashelwa okungu-19 namuhla)
Tổng hợp 8 cách làm cánh gà nướng thơm ngon đậm đà vàng giòn đơn giản | Muasalebang
[Review] Top 12 Kem Dưỡng Trắng Body (Toàn Thân) Tốt Nhất | Muasalebang